Feno ny voka-pifidianana ho an’ny faritany telo : noraofin’ny HVM ny seza 36 amin’ireo 41 | NewsMada
Efa feno sy tonga eny amin’ny foiben’ny Ceni ny voka-pifidianana loholona ho an’ny faritanin’Antananarivo sy Toamasina ary Mahajanga. Noraofin’ny HVM avokoa ny seza 36 raha miainga amin’io vokatra io.
Mbola andrasana ny voka-pifidianana avy any Fianarantsoa sy Antsiranana ary koa Toliara. Voalaza fa anisan’ny antony nahatara ny fahatongavan’ny voka-pifidianana amin’ireo faritra ireo ny haratsian’ny fifandraisana sy ny tambajotram-pifandraisana amin’ny internety sy ny toetry ny andro tato ho ato.
Ho an’ny any Toamasina, feno 100% ireo voka-pifidianana amin’ireo birao fandatsaham-bato (BV). 95,81% ny taham-pahavitrihan’ny mpifidy. Nahazo ny 64,31% ny HVM raha 16,2% ny Tim. Ny avy amin’ny Mifanasoa, nahazo 12,33%
Nahatratra 94,83% ny taham-pahavitrihana ho an’ny any Mahajanga. Mitarika amin’ny 60,85 ny HVM. Tafiditra laharana faharoa ny Mapar, nahazo 23,41% raha any amin’ny fahatelo ny Tim, 13,80%.
Ho an’ny any eto Antananarivo kosa, maherin’ny 95% ny taham-pahavitrihana. Nahazo ny 68,88% ny HVM. Faharoa ny Tim, 17,17. Tafiditra fahatelo kosa ny Marina, 8,35%.
Tsy mbola feno tanteraka ny voka-pifidianana ho an’ny any Toliara. 99,67% amin’ireo BV no nahazoana vokatra, hatry ny faran’ny herinandro teo. Voalohany ny HVM, 68,24% raha laharana faharoa ny Miara-dia, 7,68%. Fahatelo kosa ny Tim, 5,86%.
Ho manga ny lanitra etsy Anosikely
Ho an’ny any Fianarantsoa, nahazoam-bokatra ny BV 99,54%. Maherin’ny 95% ny taham-pahavitrihana. 68,34% ny an’ny HVM. Tafiditra laharana faharoa ny Fanorolohany, 9,92% ary fahatelo ny Tim, 9,36%.
Nahazoam-bokatra ny 99,34% -n’ireo BV any Antsiranana. 98,19% ny taham-pahavitrihana. Mitarika ny HVM, nahazo 64, 42. Laharana faharoa ny Leader Fanilo, 19,26. Any amin’ny fahatelo ny Mamimad, 8,02.
Araka izany, lasan’ny HVM, mikaravaty manga avokoa ny seza 36, etsy Anosikely raha tsy misy ny fiovana. Toerana enina kosa sisa ifampizaran’ireo antoko sy fikambanana hafa : telo ny Tim, iray avy kosa ny Mapar, Leader Fanilo ary ny tsy miankina Mifanasoa.